2076-Bhadra-31 || मध्यान्ह
काठमाडौं : गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ...” जनतालाई उठाउन गाइएको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला ? यसलगायत धेरै प्रगतिशील गीतले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याएका छन् । यस गीतले पञ्चायतकालदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो । यस्ता कालजयी गीतका गीतकार श्याम तमोटको नाम भने गीत जति चर्चामा आउन सकेको छैन ।
हाल नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्यामप्रकाश तमोटमा क्रान्तिकारिता मात्र होइन, सरलता र शालीनता उत्तिकै छ । उनको गीत नेपाललगायत विश्वका १७ भाषामा अनुवाद भएर विश्वभर क्रान्तिकारी जनताबीच गुञ्जिरहेको छ । उनै गीतका सर्जक तथा सङ्गीतकार तमोट केही वर्षअघिसम्म भोजपुरको दाँवाँमा एक साधारण शिक्षकका रुपमा जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए । पाँच वर्षदेखि मात्र काठमाडौँमा बस्दैआएका तमोटसँग राससका प्रमुख समाचारदाता तीर्थ भट्टराईले गरेको अन्तरङ्ग कुराकानीको सम्पादित अंश :
राल्फामा रामेश, रायन, मञ्जुल, रेमन (लक्ष्मी कोइराला), नोरेम (हरि श्रेष्ठ), निनु चापागाईं, विमल चापागाइँ, प्रदीप नेपाल (सिरोज, सोनोभ), अरिम आदि हुनुहुन्थ्यो ।
प्रसिद्घि देशभर अझ विदेशमा पनि भए पनि किन राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएन ? के तपाईंलाई सांसदको टिकट दिइएन ? या प्रयासै गर्नुभएन ?
मलाई राजनीतिभन्दा साङ्गीतिक क्षेत्र नै मन पर्‍यो । त्यो मेरो व्यक्तिगत स्वभावले गर्दा पनि होला । घरायसी समस्याले गर्दा पनि पार्टी राजनीतिमा लागिएन । सङ्गठकको रुपमा काम गरिएन ।
विसं २०३०-३२ देखि नै सङ्गीत क्षेत्रमा लागियो, लेखन खासगरी गीत लेखनमा लागी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि, पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि काम गरेको हुँ र अहिले लोकतन्त्रका अनुयायीहरु नै सरकारमा भएकाले मलाई सम्झनुभयो । मेरो गीति योगदानलाई कदर गर्दै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले मलाई यस पदमा उपयुक्त ठान्यो । यसका लागि तपाईंको संचार माध्यममार्फत सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
आम जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु – नाटक, सङ्गीतका कुरा हेर्दा चनाखो गरी हेर्ने सुन्ने गर्नुहोला । त्यसले सकारात्मक, नकारात्मक के प्रभाव पार्ला भन्ने बुझेर मात्र हेर्नुहोला । भावी पुस्तालाई कुन बाटोमा डोर्‍याउला भन्ने बुझेर राम्रालाई प्रोत्साहन र नराम्रालाई दुरुत्साहन वा हेर्न छोडिदिनुपर्छ ।
सरकारलाई म यस पदमा भएकाले आफ्नै माध्यमबाट पहल गरी सहयोगको माग गरेकै छु र स्रोतको व्यवस्थापन गरिएकै छ ।
संगीत क्षेत्रमा संघर्षरत युवा गायक शाहीमनोरन्जन | 2077-Bhadra-28
मन्त्री हुन मरिहत्ते
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सर्त
घर फर्किने हतारोमा तलव सुविधा गुमाउँदै